कसरी मैले मेरो ब्लगमा ट्राफिक टार्गेट गर्ने? तपाईले आफ्नो ... | यातायात सम्बद्ध गर्न
by बेभर्ली सानो on जुन 14, 2021
ठ्याक्कै कसरी म मेरो ब्लगमा ट्राफिक लक्षित गर्ने?
तपाइँले जानकारीहरू कम्पोजि n गर्न सुरु गर्नुका साथै विशेष मूल्यवान ब्ल्ग साइट वेबसाईटहरू जो तपाइँ अविश्वसनीय रूपले अनुकूल छ निश्चित रूपमा लक्षित गर्न को लागी तपाइँ विशेष विवरण को निर्धारित गर्नुभयो। बजार साथसाथै टाँसिनु पनि। तपाईंको साइट वेब यातायात तथ्या्कले पनि होईन। ठीक छ, तपाईंले बुझ्नु पर्छ कि तपाईंले इन्टरनेट लक्षित गर्न आवश्यक छ वेबसाइट यातायात!
सामान्यतया, ब्लग साइट लेखकहरू, विशेष गरी ती जो वेब साइटको वेब ट्राफिक तथ्या much्कमा धेरै जोड दिदैनन्, उनीहरूले कसरी प्राप्त गर्न सक्दछन् भन्ने कुराको बारेमा वेब साइट वेब ट्राफिकको बारेमा सचेत छैन। ब्लग साइट प्रोप्राइटरहरूको ठूलो सम्झौता वर्तमानमा इन्टरनेट वेबसाइट ट्राफिक बनाउनको प्रासंगिकता चिन्ताका साथ साथै थप कसरी अनलाइन अस्तित्वमा समावेश छ चिन्तित गर्नमा निर्भर छन्। तपाईलाई दु: खी हुनका लागि त्यहाँ पर्याप्त भ्यारीएबल छ जब कुनै व्यक्तिले तपाईको हेराइमा लिने कुरामा ध्यान दिन्छ।
ब्लग साइट लेखन एक सम्पत्ति हुन सक्छ
यदि तपाईं ब्ल्ग साइट लेखनमा उत्साहित हुनुहुन्छ भने, तपाईं निश्चित रूपमा आफ्नो अभियानहरू दक्षताका साथै यो अनुकूल बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि केवल तपाइँले तपाइँबाट अपेक्षा गरिएको कुराको बारेमा स्वीकार गर्नुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाइँ निश्चित रूपमा आफैं मार्केट गर्न सक्नुहुन्छ पछि एक स्थायी सहारा स्थापना गर्नुहोस्।
तपाईंको ब्लगको लागि ट्राफिक प्राप्त गर्दै
तल चिन्ता तल छ, केवल ठीक कसरी तपाइँ तपाइँको ब्लग वेबसाइट को लागी इन्टरनेट वेबसाइट यातायात उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ? ध्यानमा राख्नुहोस् कि इन्टरनेट साइट वेब ट्राफिकको एक पर्याप्त मात्रामा तपाईंले आफ्नो ब्लग वेबसाइटलाई सक्षम बनाउनको लागि कल गर्नुभयो। तपाईको समझदारीलाई सही आर्थिक रूपमा इनामदायीका साथै साथसाथै ध्यानयोग्य उद्यममा परिवर्तन गर्न यी सुझावहरूलाई दिमागमा सुरक्षित गर्नुहोस्।
बसोबास गर्नुहोस् तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिक लक्षित गर्न धेरै धेरै विधिहरू
तपाइँको ब्लग वेबसाइट को लागी एक ईमेल सदस्यता प्रकार तैयार छ। यसले तपाईंको नेटवर्कमा सदस्यता लिन मानिसहरूलाई आमन्त्रित गर्दछ। तपाईं आफ्नो प्रियजन, पार्टनरहरू, सहयोगीहरू, उपभोक्ताहरू, साथ साथै साथीहरूसँग सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको लक्षित विशिष्ट कोठामा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूको ब्ल्ग साइट वेबसाईटहरूको बारेमा कुरा गर्नुका साथै पढ्नुहोस्, अनुपालन गर्नुहोस्। यसलाई उपयोगी, आकर्षक, साथै थप बुद्धिमान टिप्पणीहरू बनाउनको लागि हेर्नुहोस् किनकि उनीहरू निश्चित रूपमा तपाईंको ब्लग साइट रचना गर्ने क्षमता दर्पण गर्दछ। तपाईंलाई भिडियोको टेपमा अन्यको रुचि आवश्यक पर्दछ, उनीहरू सम्भवतः इन्टरनेट लिंकलाई तपाईंको आफ्नो कार्यमा लिने सम्भावना भन्दा बढी नै छन्।
पिंग-ओ-म्याटिक सुविधा प्रयोग ब्लग वेबसाइट निर्देशिका साइट वेबसाइटहरूमा जब तपाईं सुरू गर्नुहुन्छ।
तपाइँको ब्लग साइट वेबसाइट आम अनलाइन खोज ईन्जिन साथ साथै ब्लग वेबसाइट निर्देशिका साइट वेबसाइट को लागी पठाउनुहोस्। आजकाल तिनीहरू मध्ये धेरै पूर्ण रूपमा निःशुल्क आउँछन्।
तपाईंले प्रदान गर्नुभएको इ-मेल हलमार्क जानकारीमा तपाईंको ब्लग साइट वेबसाइटहरूमा इन्टरनेट लिंक समावेश गर्न नबिर्सनुहोस्।
तपाइँको वेबसाइटको इन्टरनेट पृष्ठहरूमा वा तपाइँले आपूर्ति गर्नुहुने कुनै पनि प्रकारको ई-न्यूजलेटरमा इन्टरनेट लि link्क प्रयोग गर्नुहोस् साथै थप सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईले स्थापना गर्नुभएको सबै प्रकारका अन्तर्क्रियामा यो गर्नुहोस्।
बसोबास गर्नुहोस् पाहुना ब्लगिंगको अप र डाउन्स - यो तपाईंलाई कसरी मद्दत गर्दछ जान्नुहोस् ...
यदि तपाइँ ह्यान्डआउट्स, व्यवसाय कार्ड, साथ साथै विज्ञापन र मार्केटि strategy रणनीतिको लागि ब्रोशरहरूको उपयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँको ब्लग वेबसाइटको यूआरएल जारी गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
यो आरएसएस फिड यूआरएलको लागि खाली हुन्छ जसमा मानिसहरूले सहजैका लागि दर्ता गर्न सक्छन्।
ध्यान दिनुहोस् तपाईंको ब्लग वेबसाइटमा अपडेटहरू जारी गर्नका लागि धेरै उपभोक्ताहरू ल्याउन।
तपाइँको कार्यक्रममा यी सिफारिसहरू समावेश गर्नाले तपाइँको ब्लग साइट वेबसाइट मार्केटिंगमा बिल्कुल तपाईलाई ठूलो सहयोग गर्दछ। त्यो मात्र होईन, यद्यपि तपाईं यसको अतिरिक्त वेब साइट वेब ट्राफिकलाई लक्षित गर्नुहुन्छ!
तपाइँले तपाइँको विवरणहरू विशेष कोठा विकसित गर्नुभयो साथै त्यस्तै जानकारीपूर्ण कम्पोजिंग सुरु गर्नुभयो साथै त्यस्तै फाइदाजनक ब्लग साइट वेबसाइटहरू जुन तपाइँ धेरै विशेष हुनुहुन्छ निश्चित रूपमा लक्षित बजार उत्पन्न गर्दछ साथै थप पालन गरेर। क्वेरी तल सूचीबद्ध छ, ठीक केवल कसरी तपाईं आफ्नो ब्लग वेबसाइट को लागी साइट वेब यातायात सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ? याद गर्नुहोस् कि इन्टरनेट वेबसाइट ट्राफिकको एक महत्त्वपूर्ण रकम मात्र तपाईंलाई तपाईंको ब्लग वेबसाइटलाई विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ। तपाईको ब्ल्ग वेबसाईट को लागी एक ई-मेल ईनरोलमेन्ट प्रकार छ। पढ्नुहोस्, अनुसरण गर्नुहोस्, र साथै थप अरू व्यक्तिको ब्ल्ग साइट वेबसाइटहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस् जुन तपाईंको लक्षित विशेष कोठामा छन्।